Luchie Mendoza Allen: manfaat sirsak bagi manusia
manfaat sirsak bagi manusia Uru nke soursop mkpụrụ dị mma dị ka uru nke dragọn ahụ mkpụrụ, soursop mkpụrụ nwere otutu uru ilebara a dum nso nsogbu ahụ. A otutu nnyocha na-ekwu na ndị soursop mkpụrụ nwere ike ji mee ihe dị ka onye ọzọ cancer -agwọ ya. Ọ bụghị nanị na nke mkpụrụ osisi nke na anyị nwere ike isi na-eji , ma n'akụkụ ndị ọzọ dị ka soursop doo ka anụ ahụ anyị nwere ike isi na- erite uru .
Soursop mkpụrụ bụ na mkpụrụ osisi ahụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ , e nwere dị ka adụ ogwu kama obere na akpụkpọ nwere ụtọ na utoojoo uto . Ga- enwe ike iji nweta Njirimara nke mkpụrụ sirrsak , i nwere ike na-aṅụ ya ozugbo ma ọ bụ na-eme ya ihe ọṅụṅụ ọṅụṅụ nwere ike kwụsị agụụ mmiri.
Ntak emi soursop mkpụrụ ike ịnagide ọrịa dị iche iche ? Nke a bụ n'ihi na ọdịnaya dị na soursop mkpụrụ, soursop mkpụrụ nke bara ọgaranya na vitamin C ọdịnaya nke 20 mg kwa 100 grams nke mkpụrụ obụkidem. Ọdịnaya nke vitamin C a dị nnọọ elu na soursop mkpụrụ bụ antioxidant na -arụ ọrụ iji meziwanye anyị dịghịzi usoro . Ke adianade soursop bụkwa ọgaranya eriri nke ruru 3,3 g kwa 100 g nke mkpụrụ anụ , nke dị mkpa anyị na ozu . Ndị na-esonụ na tebụl bekee dizi soursop mkpụrụ ( kwa 100 grams ) na uru anyị nwere ike inwe .
Abụba : 0,3 grams
Calcium ( bịa ): 14 mg
Site ( P ): 27 mg
Eriri : 2 g
Ígwè ( bụrụgodị ): 0,6 mg
Vitamin A : 1 Re / 10 ( si )
Vitamin C : 81,7 20 mg
Ịnagide afọ ọsịsa ma ọ bụ afọ ọsịsa na ụmụ ọhụrụ
Ọ bụrụ na nwa nwere afọ ọsịsa ma ọ bụ omume rụrụ stools mgbe ị nwere ike ozugbo ịkwadebe soursop mkpụrụ bụ mfri eke , mgbe ahụ, squeezed na ẹdụk iji mmiri. N'ikpeazụ -aṅụ 2-3 tablespoons nke afọ ọsịsa na ụmụ ọhụrụ .
Na-emeso ọrịa imeju
Ọ dabara nke ọma na-emeso gị imeju ahụ ndị ọzọ nri ngwa ngwa nri . Ị na mkpa ka na-aṅụ ihe ọṅụṅụ soursop 1 izu dị ka nri ndochi .
Na-emeso hemorrhoid .
Soursop mkpụrụ nwekwara ike iji na-emeso hemorrhoid. Nke atọ , afanyekwa na soursop mkpụrụ bụ mfri eke , mgbe ahụ, lee 1 cup mmiri. Na-aṅụ 2 ugboro n'ụbọchị, n'ụtụtụ na n'ehihie .
Iji merie mmamịrị eriri afo mgbu
Jikere ọkara mfri eke mfri soursop , shuga na nnu nụrụ ụtọ . Esi nri niile Efrata n'ime compote . Eri nkịtị , na rụrụ ya anya kwa ụbọchị maka 1 izu n'usoro.
Na-emeso ANYANG - anyangen
ANYANG - anyangen bụ isi urination ele ka a na-ere ihe mgbu. Iji merie ya ozugbo ịkwadebe ọkara mfri eke mfri soursop na sugar nụrụ ụtọ . Mgbe soursop mkpụrụ peeled ma sie na sugar tinyere 2 iko mmiri. Mgbe nri , ka nje na-aṅụ mmiri.
Ndị ọzọ Njirimara nke soursop mkpụrụ bụ imeri ndikan afọ ntachi , na-enyere ọkpụkpụ a kpụworo , dịkwuo ntachi obi, jiri nke merela agadi Usoro e ji dị ka onye ọzọ ọgwụgwọ gallstones , antisembelit , gout , mụbara agụụ , ma rụọ ọrụ ndị digestive usoro
Diposting oleh Lisa Fernandez di 07.01